နိုဝင်ဘာ 2018 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
နိုဝင်ဘာ 25, 2018 နေ့
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃ဝ ကျော်က ဖြစ်လေ၏။ ကျွန်ုပ်၏ဦးကြီးမိသားစုသည် မြို့လယ်မကျတကျ နေရာကောင်း တစ်ခု၌ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ဖူးလေ၏။
ဦးကြီး၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သည် အထူးပင် အောင်မြင်ခဲ့၏။ များသောအားဖြင့်မိမိတို့ရပ်ကွက်ထဲမှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များကိုသာ အားပေးလေ့ရှိကြသော်လည်း ဦးကြီး၏ဆိုင်မှာမူ ဝေးသောလှမ်းသော ရပ်ကွက်များမှပင် လာရောက်အားပေးခြင်းကို ခံရလေ၏။
ထို့ကြောင့်ဦးကြီး၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အချိန်ပြည့်ပင် လူစည်ကားနေလေတော့၏။ အထူးသဖြင့် နံနက်စောစောများနှင့် ညနေစောင်းများ၊ ညဦးပိုင်းများဆိုလျှင် ထိုင်စရာခုံပင် မရလောက်အောင် လူပြည့် နေ လေတော့၏။ ဦးကြီးတို့မိသားစုမှာလည်း နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်အတွင်းမှာပင် စီးပွားအထူးတက်ကာ သူတို့၏ ကလေး များကို ကျောင်းကောင်းစွာထားနိုင်ခဲ့၏။ ထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးအိမ်လေးမှ သည် သစ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် အိမ် ကလေး ဖြစ်လာခဲ့လေ၏။
ဦးကြီးတို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အောင်မြင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဝမ်းသာရ၏။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်ု်ပ်တို့ကို ဦးကြီးက မုန့်ဖိုးပဲဖိုးလေးများ မကြာမကြာပေးလေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်လေ၏။ ကျွန်ုပ် တို့မိသားစုတွင် ငွေကြေးကျပ်တည်းသောအခါများ၌လည်း ဦးကြီးက ကူညီလေ၏။
မှတ်မှတ်ရရ . . . လွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သော ဦးကြီး၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သည် သုံးနှစ်မြောက်သော ကာလတွင် ရောင်းအား သိသိသာသာ ထိုးကျသွား၏။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် လာရောက်သောက်သုံးသူများ နည်းသထက် နည်းလာကာ နောက်ဆုံးတွင် ဆိုင်အလုပ်သမားများကိုပင်တဖြည်းဖြည်း လျော့လာခဲ့ရ၏။ ထိုထက် ပိုဆိုးလာသောအခါ အဖျော်ဆရာများ၊ မုန့်ဆရာများပင် မရှိတော့ဘဲ ဦးကြီးတို့ လင်မယားနှစ်ဦး ကသာလျှင် လက်ဖက်ရည်ဖျော်၊ စားပွဲထိုး . . .စသည်ဖြင့် ချို့ငဲ့စွာ ရုန်းကန်လာရလေ တော့၏။ နောက်ဆုံး တွင်မူ ဦးကြီး၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးသည် အကြွေးတင်၊ အရင်းပြုတ်၊ ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရလေတော့ သတည်း ဆိုသည်နှင့်ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရပါလေတော့၏။
ငယ်စဉ်ကမူ ကျွန်ုပ်သည် ဦးကြီးတို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေး ဘာကြောင့်ထိုသို့ ဖြစ်သွားကြသည်ကို စဉ်းစား၍မရခဲ့ပါ။ နောင်သော် ကျွန်ုပ်သည် ဗေဒင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာကြီးဖြစ်သော အဘမင်းသိင်္ခက ကျွန်ုပ်တို့အား ဆန်းပညာကိုလည်းသင်ပေးလေ၏။ ဆန်းပညာတွင် ဣဋ္ဌအနိဋ္ဌ၊ အကောင်း အဆိုး ခွဲသောကဏ္ဍသည် အထူးအရေးကြီးလေ၏။ အဘမင်းသိင်္ခက –
“ကိုယ့်အိမ်တို့၊ ကိုယ့်ဆိုင်တို့ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်တို့၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်တို့ဆိုတာတွေဟာ မင်္ဂလာယူရသော၊ ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိသော အရပ်မျက်နှာတွေကွ . . .၊ အဲဒီအရပ်ဌာနတွေမှာ မကောင်းတာတွေလာပြီး မြင်နေကြားနေ၊ ကြုံနေရရင် ကျက်သရေ မင်္ဂလာပျက်ပြီး ကိုယ့်ဆီမှာ လာခိုက် ရောကွ။
ဥပမာဆိုပါတော့ကွာ . . .၊ ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်က ဆိုင်ခန်းမှာ နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ တရားခွေ တွေရောင်းတယ်ဆိုပါတော့ . . .အဲဒါ ကိုယ့်အတွက် ကျက်သရေမင်္ဂလာတိုးစေတယ်ကွ . . .၊ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ဆိုင်မှာ စီးပွားတက်အောင်မြင်မယ့်နိမိတ်ပဲကွ . . .၊
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ခေါင်းရင်းဘက်ကဆိုင်ဟာ အမူးသမားတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့အရက်ဆိုင် ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် ကျက်သရေမင်္ဂလာပျက်ပြီး နေရင်းထိုင်ရင်း ခိုက်နေတတ်တယ်ကွ၊ စီးပွားပျက် တော့မယ့်နိမိတ်ပဲကွ . . .” စသည်ဖြင့် မိမိက မည်မျှပင် ကြိုးစားနေစေကာမူ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ကိုလိုက်၍ မိမိတို့အပေါ်တွင် အကောင်းအဆိုး သက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သင်ပေးသွားခဲ့ပါသည်။
အဘ၏ ထိုသင်ခန်းစာအပြီးတွင် ကျွန်တော်သည် ဦးကြီးတို့၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကို ချက်ချင်းပင်ပြေး၍ မြင်ယောင်သွားမိပါတော့သည်။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါပေသည်။ ဦးကြီးတို့ဆိုင် လွန်စွာအောင်မြင်ခြင်းနှင့်အတူ ထိုနေရာမှဆိုင်တန်းများသည် ငှားခ ဈေးတက်လာလေ၏။ ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ များလည်း သိသိသာသာ တက်လာလေ၏။ ဤတွင် ဆိုင်အပြောင်းအလဲများလည်း ဖြစ်လာလေတော့၏။ ဦးကြီးတို့၏ဆိုင်ခေါင်းရင်းမှဆိုင်သည် မူလက အုန်းငှက်ပျောရောင်းသောဆိုင်ဖြစ်၏။ ထိုဆိုင်က ထွက်သွားပြီး အရက်ဆိုင် တစ်ဆိုင် ရောက်လာခဲ့၏။
ထိုသို့လျှင် ခေါင်းရင်းဘက်၌ အရက်ဆိုင်ရောက်ပြီး များမကြာမီမှာပင် ဦးကြီး၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး သည် သိသိသာသာ ထိုးဆင်းသွားခြင်း ဖြစ်ပါလေတော့၏။ ထို့ကြောင့်. . .
၁။ မိမိတို့အိမ်၊ မ်ိမိတို့ဆိုင်၊ မိမိတို့ရုံးခန်း၏ ခေါင်းရင်းဘက်တွင်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် ကောင်းသော အလုပ်ဌာနများရှိနေလျှင် မိမိတို့အတွက် စီးပွားတက်အောင်မြင်စေမည့် နိမိတ်ကောင်းရပါသည်။ ခေါင်းရင်း ဘက်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှ အလုပ်ဌာနများ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေလျှင်လည်း မိမိအတွက် စီးပွားတက် အောင်မြင်စေမည့်နိမိတ်ကောင်းရပါသည်။
၂။ မိမိတို့၏အိမ်၊ မိမိတို့၏ဆိုင်၊ မိမိတို့ရုံးခန်း၏ ခေါင်းရင်းဘက်တွင်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် မကောင်းသော အလုပ်ဌာနများရှိ နေလျှင်မူ မိမိတို့အတွက် လာဘ်တိတ်စီးပွားပျက်စေခြင်းဆိုးကျိုးများကို ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းရင်းဘက်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှ အလုပ်ဌာနများ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီး နေလျှင် လည်း မိမိတို့အတွက်ကိုပါ လာ၍ခိုက်စေတတ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့အတွက် မင်္ဂလာယူရာ ခေါင်းရင်းဘက်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တို့မှ ကောင်းနေလျှင် ဝမ်းသာစရာဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ဦးကြီးကဲ့သို့ကြုံလာလျှင်မူ –
– မိမိတို့၏အိမ်တွင်၊ ဆိုင်တွင်ဘုရားစင်၊ ဘုရားခန်းကို ပုံမှန်ထက်ပို၍ ထူးထူးခြားခြားသပ္ပာယ်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
– ပုံမှန်ထက်ပို၍ ဘုရားစာ၊ တရားစာများ ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ တရားခွေများဖွင့်ခြင်း . . . စသည်တို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ကြုံလာနိုင်သော အညံ့အခိုက်များကို ဟန့်တားစေနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း . . .။
မူရင်း – Myanmar Home & Decor Magazine
နိုဝင်ဘာ 21, 2018 နေ့
ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေကသိပ်ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင် တစ်ခါတရံဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ထူးခြားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။အိမ်ကိုတောက်ပြောင်ပြီးကျက်သရေရှိနေချင်တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့ ထိတ်လန့်စရာပါ။
ဒါပေမဲ့ အရောင်ကွဲတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချမယ်ဆိုရင် ကျက်သရေရှိပြီးလှပတဲ့နေရာတစ်ခုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအရောင်ကွဲ တွေကအဓိကကျလာပါလိမ့်မယ်။ အရောင်အရမ်းဖျော့နေတာ၊အရမ်းအရောင်ရင့်နေတာဒါမှမဟုတ် ပြောင်တလင်းခါနေတာမျိုးဆိုရင် အရောင်ကွဲတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ကွဲတွေကိုအသုံးပြုဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အရောင်ဖျော့တွေကိုအရောင်ရင့်တွေနဲ့တွဲဖက်ပေးခြင်းပါ။ဒီအရောင်ကွဲတွေကဘယ်လောက်တောင်လိုက်ဖက်ညီသလဲဆိုတာသင်ကိုယ်တိုင်တောင် အံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အိပ်ခန်းလေးတစ်ခုဖန်တီးဖို့ သမားရိုးကျပရိဘောဂတွေအသုံးပြုပါ။တိုင်လေးတိုင်နဲ့နှစ်ယောက်အိပ်သစ်သားကုတင်ကြီးက ဂန္ထဝင်ဆန်တဲ့အသွင်အပြင်ကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။သစ်သားရောင်ရဲ့နွေးထွေးမှုကရေခဲပြာရောင်နံရံနဲ့တွဲဖက်လိုက်တဲ့အခါမှ ပိုပြီးမဟာဆန်လာ
တာပါ။နေထိုးတဲ့အခန်း(ဥပမာ-တောင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အခန်း)ထဲမှာအပြာရောင်ကြောင့် အေးမြပြီးလန်းဆန်းတဲ့အသွင်အပြင်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ပိုပြီးထူးခြားချင်တယ်ဆိုရင် အရောင်ရဲရဲ၊အကွက်ဆင်ကြီးကြီးနဲ့စောင်တွေကိုအသုံးပြုပါ။အားလုံးပြီးသွားရင်တလက်လက်တောင်တောက်ပ
မီးဖိုချောင်ထဲမှာအဖြူရောင်အသုံးပြုတာဒီနေ့ခေတ်မှာအရမ်းခေတ်စားပါတယ်။ပေါ့ပါးတဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေပေမယ့် အိမ်ပိုင်ရှင်အများစုကတော့ ပိုပြီးဇိမ်ကျတဲ့မီးဖိုချောင်တစ်ခုကိုသာဖန်တီးချင်ကြပါတယ်။နည်းလမ်းကတော့အရောင်အနုနဲ့အရင့်ကို မျှတအောင်အသုံးပြုဖို့ပါ။မီးဖိုချောင်ထဲမှာဆိုရင် အဖြူရောင်စားပွဲတွေကိုအညိုရောင်ရင့်ရင့်ဗီရိုတွေနဲ့တွဲထားလို့ရပါတယ်။တည်ငြိမ်ပြီး နွေးထွေးတဲ့ခံစား ချက်မျိုးရရှိနိုင်ဖို့ အဝါရောင်အုတ်နံရံနောက်ခံမှာ မီးချောင်းများများထွန်းထားပေးပါ။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတောင် အရောင်ကွဲနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကဆန့်ကျင်ဘက်အလှကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အရောင်တွေကို နှစ်သက်သူဆိုရင်တောင် အလွန်အကျွံဖြစ်သွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ အရောင်တွေကိုရောနှောအသုံးပြုဖို့ တွန့်ဆုတ်နေတတ်ပါ တယ်။ဒါဆိုရင် တောက်ပတဲ့အရောင်တစ်ခုတည်းကိုအခန်းထဲမှာညီညီမျှမျှအသုံးပြုပေးပါ။အရောင်အတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရနိုင်သလိုအခန်းကလည်း ပိုပြီးသေသပ်လှပသွားပါလိမ့်မယ်။
အရောင်ကွဲကိုနှစ်ထပ်အသုံးပြုတဲ့အခါ လှပမှုကလည်းနှစ်ဆဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီဧည့်ခန်းမှာဆိုရင် ထိုင်ခုံနှစ်လုံးမှာတစ်ခန်းလုံးကအရောင် ကွဲတွေ လာပြီးထင်ဟပ်နေပါတယ်။နံရံက နို့နှစ်အဖြူရောင်နဲ့ကြမ်းပြင်ကအက်စ်ပရက်ဆိုကော်ဖီရောင်ကိုထိုင်ခုံရဲ့ကိုယ်ထည်နဲ့ဘောင်တွေမှာ ထပ်ပြီးအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။အခန်းအပြင်အဆင်ဒီဇိုင်းကိုပိုပြီးလင်းလက်သွားစေသလိုစွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ထိုင်ခုံနှစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပေါ်လာ စေပါတယ်။
အဝါဖျော့ရောင်က ထမင်းစားခန်းမှာအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့အရောင်တွေထဲကတစ်ခုပါ။အဝါရောင်ဆိုရင် အရမ်းဖျော့တဲ့အဝါရောင်ကတောင် နွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။သစ်သားပရိဘောဂတွေထဲကရွှေရောင်အရောင်အသွေးကိုမီးမောင်းထိုးပေးနိုင်တဲ့အရောင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရောင်ဖျော့နဲ့အရောင်ရင့်တွဲဖက်ခြင်းကြောင့် စားသောက်ထားတဲ့ပန်းကန်တွေသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတောင် မိသားစုတွေနဲ့မိတ်ဆွေသူ ငယ်ချင်းတွေ ထိုင်စကားပြောနေချင်စိတ်ပေါက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ထမင်းစားခန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ခပ်ဖျော့ဖျော့မီးခိုးရောင်ဆေးသုတ်ထားတဲ့ရေချိုးခန်းကအနည်းငယ်ပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့ ခေတ်မီရေချိုးခန်းကနေ ဂန္ထဝင်ဆန်တဲ့ရေချိုးခန်းအသွင်ပြောင်းလဲလို့ရလောက်အောင် ဘက်စုံအသုံးဝင်ပါတယ်။ဂန္ထဝင်ဆန်တဲ့ရေချိုးခန်းအတွက် ပြောင်လက်နေတဲ့ကြေးနီရောင်ရင့်ရင့်ဘုံပိုင်ခေါင်း၊
ရေပန်း၊ကုန်မာပစ္စည်းတွေနဲ့အရံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်ပါ။အရောင်ဖျော့တဲ့နောက်ခံမှာအရောင်ရင့်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကပေါ်လွင်နေပါလိမ့် မယ်။ရေချိုးခန်းကရှေးဆန်တဲ့အသွင်အပြင်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။
နေရာလေးတွေကိုအဖြူရောင်သုတ်ပေးပါ။ လှေကားထစ်မှာ ပြတင်းပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင် သဘာဝအလင်းရောင်များများဝင်ပါစေ။ဒီနေရာမှာ အရောင်တွေကိုထည့်စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ နံရံမှာဆေးအဖြူရောင်သာလိုက်ထပ်လိုက်ပါ။လှေကားထစ်လေးတွေမှာအရောင်နှစ်မျိုးအသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးလှပသွားပါလိမ့်မယ်။လှေကားထစ် နံရံလေးတွေကိုအဖြူရောင်သုတ်ပြီးလှေကားထစ်မျက်နှာပြင်ကိုအက်စပက်ဆိုကော်ဖီရောင်သုတ်ပါ။လှေကားတစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ် အရောင်ကွဲနှစ်ခု ပေါင်းစပ်မှုကကြော့မော့လှပနေပါလိမ့်မယ်။
နိုဝင်ဘာ 18, 2018 နေ့
လှေကားအဟောင်းကိုအလှဆင်ဖို့ ငွေကြေးအကုန်အကျအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းက ပြန်အချော ကိုင်ဖို့ပါ။ လှေကားထစ်တွေရဲ့ဒေါင်လိုက်အပိုင်းတွေကို အရောင်တစ်မျိုးတည်းလိုက်သုတ်ပြီး အလျားလိုက် အပိုင်းတွေကို ပြန်အချောကိုင်ခြင်းဖြင့်လှေကားကို အသွင်ပြောင်းလဲပစ်လို့ရပါတယ်။ လက်ရန်းတိုင်တွေကို ဆေးသုတ်ပြီး လက်ရန်းတွေကို ပြန်အချောကိုင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ပိုပြီးသမားရိုးကျ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပေမယ့် စတိုင်လ်ကျတဲ့ ကော်ဇောတစ်ခုခင်းပြီး ခေတ်မီတဲ့ အပြင်အဆင်ဖြစ်အောင် အလွယ်တူဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
မှန်လက်ရန်းတွေကို လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြပေမယ့် လှေကားက ဘယ်ကိုဦးတည်နေလဲဆိုတာ ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ အရင်ဆုံးမှန်လက်ရန်းမှာ လက်ဗွေရာတွေထင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်မှု ကိုနှစ်သက်သူဆိုရင် မှန်ကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးဖို့လိုလာပါပြီ။ နောက်ပြီး မှန်လက်ရန်းရှိရုံနဲ့တင် မလုံ လောက်ပါဘူး။ မှန်လက်ရန်းအပေါ်မှာ လက်ရန်းတစ်ခုထပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပုံစံလိုချင်တယ် ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကို သေချာစဉ်းစားပါ။
ဒီပုံစံက ငွေကြေးအကုန်အကျများပါတယ်။ အပွင့်ပုံစံ၊လွင့်မျောနေတဲ့ဟန်နဲ့လှေကားထစ်တွေမှာ ထောက်ပံ့ပေးဖို့သံမဏိကိုယ်ထည်ကောင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ သံမဏိကဈေးကြီးပါတယ်။ လက်ဖက်ထောက် ကလေးငယ်လေးက ဧည့်ခန်းထဲမှာလျှောက်သွား နေတတ်တယ် ဆိုရင်အလျားလိုက် လှေကားနေရာ တစ်ခုချင်းစီကြားမှာ လေးလက်မထက်မကျော်ပါစေနဲ့။ ဒါဆို ကလေးကျွံမဝင်သွားနိုင် တော့ပါဘူး။
လှေကားလက်ရန်းတွေအတွက် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တယ်ဆိုရင် မူလလှေကားပုံစံရရှိဖို့ လိမ္မာပါးနပ်တဲ့နည်းတွေကို အသုံးပြုရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒေါင်လိုက်လှေကားထစ် နေရာကိုကျဉ်းသွားစေဖို့ အလျားလိုက်လှေကားထစ်နေရာကို ထုထည်အရွယ်အစားကြီးမားအောင် လုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့စိပ်တဲ့ပုံစံပေါက်အောင် လက်ရန်းတိုင်တွေကို သံမဏိအသုံးပြုထားပါတယ်။
Myanmar Home & Decor Magazine (Vol – 5,Issue – 6)